Mootummaan Jarman waliigalteen dhukaasa dhaabuu atattamaan qaama hundaan akka irratti waliigalamu gaafate – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsMootummaan Jarman waliigalteen dhukaasa dhaabuu atattamaan qaama hundaan akka irratti waliigalamu gaafate
Mootummaan Jarman waliigalteen dhukaasa dhaabuu atattamaan qaama hundaan akka irratti waliigalamu gaafate
Mootummaan Jarmaan karaa waajira haajaa alaasaa ibsa baaseen ”gabaasni haaraan Itoophiyaarraa dhufu nama yaaddessaa” jedhe. Gaaga’amni namoomaa Tigraay keessa jiru ittuu hammaachaa jiraachuu hubanneerraas jedhe. kutaa hawaaasaa adda addaa gidduu walitti bu’iinsi dabalaa jira, kana dhaabsisuun ni danda’amaa jedha.
Qaamoleen lola Tigraay keessatti hirmaatan hunduu atattamaan dhukaasa dhaabuuf waliigaluufi kabajuu qabu jedha mootummaan Jarman. Humnoonni alaa hunduu naannoo Tigraay keessaa atattamaafi guutummaatti bahuunis dirqama ta’uun ifadha jedhe.
Sarbama mirga namoomaa raawwateef qorannoon ifa ta’e akka gaggeefamu feenas jedha ibsichi.
Itti dabaluunis waraanaafi heera mootummaa haala hin kabajneen daangaa haaraa sararuun fudhatama hin qabu jedheera. Mootummaan Ameerikaas torbee dura ibsa baasee tureen dhimma daangaa sararuu jecha walfakkaatu fayyadamee fudhatama kan hin qabne ta’uu ibsee ture.
Mootummaan Jarman amma Tigraay keessatti deeggarsa namoomaa dhiyessuutu dursi kennamuufi qaba jedhe.
Ibsi kun kan bahe naannoleen Itoophiyaa keessa jiran humnoota waraanaa naannoo Amaaraafi kan mootummaa federaalaa akka gargaaraniif gara adda waraanaatti ergaa jiraachuun wayita gabaasamaa jirutti.
Mootummaan Itoophiyaa biyyootni lixaa humnoota TPLF deeggaran jiru jechuun qeeqa.
Odeessaalee biroo dubbisuu
Mootummaan Tokkummaa Biyyoolessaa Akka Hundaa’u Gaafanna: Gamtaa Medirek WAASHINGITAN, DIISII — (voaafaanoromoo)---Gamtaan Medrek wal ga’ii…
Mootummaan Barsiisota Mallaqaan Sobuun Filannoof Uummata Akka Galmeessaniif Bobbaasuun Ifoome!
Mootummaan Barsiisota Mallaqaan Sobuun Filannoof Uummata Akka Galmeessaniif Bobbaasuun Ifoome! -- SBS-Ebla, 27/2021 -- Magaalaa…
Mootummaan Afrikaa Kibbaa Lammii isaa akka church hin dhaqne jedhee dhorkee jira.
Mootummaan Afrikaa Kibbaa Lammii isaa akka church hin dhaqne jedhee dhorkee jira. Irra jireessi uummata…
Warri ABIN fi Balderas lafa nagaa Finfinnee irraa barbaachisummaa lolaa afarsu, mana ofii taa’anii ‘twitter campaign’ godhu.
Kan akkasii kun Afaan Oromoon Fakkeessituu jedhamti!!